साँझमा अनिवार्य आरती गर्नुहोस् : के छन् लाभ ? साँझमा के गर्नुहुँदैन? « Lokpath
२०७७, ११ फाल्गुन मंगलवार १८:३०
साँझमा अनिवार्य आरती गर्नुहोस् : के छन् लाभ ? साँझमा के गर्नुहुँदैन?
प्रकाशित मिति : २०७७, ११ फाल्गुन मंगलवार १८:३०
काठमाडौं – साँझ परेपछि हामी घरको सरसफाई गर्न थाल्छौँ । कारण साँझमा धेरैको घरमा आरती गरिन्छ । आरती गर्दा केही कुरामा भने ध्यान दिनुपर्छ ।
-हरेक साँझ घरको आँगन, पिँढी, दलान, कोटा कुचोले सफा बनाउने
-गाउँघरमा भए गाईको गोबरले लिपेर सफा बनाउने, ढलान घर भए पुछपाछ पार्ने
-होहल्ला, अनावश्यक गफगाफ, चियोचर्चो नगर्ने, पानी सार्न प्रयोग गर्ने गाग्री लोटा र पूजाकोठाका भाँडाकुँडा राम्ररी सफा गर्ने र पानी भर्ने
-घरमा सबैतिर उज्यालो हुनेगरी बत्ति बाल्ने
-पूजाकोठामा झिलिमिली बत्ती बाल्ने
-शान्तमा बसेर परिवारको एक सदस्यले आरती गर्ने
-भगवान्लाई सफा जल चढाउने, घण्टी बजाउने
-दियो बालेर पूजाकोठाबाट दियोघरमा सार्ने ।
-परिवारका सबै सदस्य जम्मा हुने
-समझदार वातावरणमा गफ गर्ने
साँझमा के नगर्ने ?
कहिलेकाहिँ मानव जाति आफ्नै कारणले दुख झेल्न बाध्य हुन्छ । किनकी उसलाई आफूले गरेको राम्रो – नराम्रो कुराबारे खासै ज्ञान हुँदैन । तर यहाँ शास्त्रले भनेका केहि कुराहरु प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् तपाईको लागि राम्रा दिनहरु आउन सक्छन् । के हुन् तयस्ता काम जुन घरमा साँझ गर्दा असाध्यै शुभ हुन्छ ।